ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလား မေးကြပြော နေကြတဲ့ အ ပေါ် ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် အိမ့်ချစ် – Myanmar Update News
July 30, 2020Up To Date0 Comments
နာမည်ကျော် အဆိုတော်မလေး အိမ့်ချစ်က တော့ ဖခင်ဖြစ်သူ အဆိုတော်ကြီး ဦးချစ်ကောင်းနဲ့ တွဲသိကြသလို တစ်ကိုယ်တော် အောင်မြင်မှုတွေ လည်းရရှိနေပြီး ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိုက်ဖက်ညီလှတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကိုရရှိခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားကျခြင်းကိုခံနေရတာပါ။ ယနေ့ မှာတော့ အိမ့်ချစ်ဟာ သူမကိုကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတဲ့ အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်က “အရမ်းဝလာတာကြောင့်ပါ…. ကိုယ် ဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး….. အိမ့်ချစ်က အရပ်ပုတော့ ဝလာလို့ရှိရင် ခါးတုတ်လာတာ…. အိမ့်ချစ်က နဂိုကတည်းက ခါးတိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာပါတော့
ကိုယ်ဝန်ရှိ နေတာလား ထင်ကြတာပေါ့….. ကိုယ် ဝန်ရှိနေတာလား အမေးခံရတာအထိ အိမ့်ချစ်က လက်ခံတယ်….. တချို့က ငါးလလောက် ရှိနေပြီဖြစ်မယ် ဆိုပြီးပြောနေကြတော့… ယူထားတာမှတလကျော်ပဲရှိသေးတာ ဘယ်လိုငါးလလဲပေါ့….
အဲ့လို နားမလည်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိနေတော့ အိမ့်ချစ်ကရှင်းပြရတာပေါ့.” လို့ အိမ့်ချစ်က လက်တလော သိသိသာသာ ဝလာ ၊ ခါးတုတ်လာတာကြောင့် ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလား မေးကြ ၊ ပြောနေကြတဲ့ အပေါ် ပြောလာခဲ့တာပါ။
အိမ့်ချစ်က သူမအနေနဲ့ ၂ နှစ်လောက် နေပြီးမှသာ ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ် ရှိကြောင်း အခုအ ချိန်မှာ ဘဝကိုရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တာကြောင့် သူမတို့ဘဝထဲ ဝင်လာမယ့် ကလေးလေးအတွက် အသင့် မဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်မိတာကြောင့် သူမတို့ ၂ ယောက် အသင့်ဖြစ်ချိန်မှသာ ကလေးယူမယ့် အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ကတော့ ဝလာလို့ ခါးတုတ်လာ တဲ့အပေါ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ မေးကြ ပြောကြတဲ့အပေါ် ပြန် လည်ဖြေရှင်းပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိတ် သတ် ကြီးရေ။လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ ခေတ်စားနေတာကြောင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်
(Unicode version) ကိုယျဝနျ ရှိနပွေီလား မေးကွပွော နကွေတဲ့ အပျေါ ပွောလာတဲ့ အဆို တျော အိမျ့ခဈြ
နာမညျကြျော အဆိုတျောမလေး အိမျ့ခဈြက တော့ ဖခငျဖွဈသူ အဆိုတျောကွီး ဦးခဈြကောငျးနဲ့ တှဲသိကွသလို တဈကိုယျတျော အောငျမွငျမှုတှေ လညျးရရှိနပွေီး ဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လိုကျဖကျညီလှတဲ့ ခငျပှနျးသညျကိုရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားကခြွငျးကိုခံနရေတာပါ။ ယနေ့ မှာတော့ အိမျ့ခဈြဟာ သူမကိုကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ ဝိုငျးဝနျးပွောဆိုနကွေတဲ့ အပျေါ ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အိမျ့ခဈြက “အရမျးဝလာတာကွောငျ့ပါ…. ကိုယျ ဝနျရှိတာမဟုတျပါဘူး….. အိမျ့ခဈြက အရပျပုတော့ ဝလာလို့ရှိရငျ ခါးတုတျလာတာ…. အိမျ့ခဈြက နဂိုကတညျးက ခါးတိုတဲ့ အမြိုးအစားထဲမှာပါတော့
ကိုယျဝနျရှိ နတောလား ထငျကွတာပေါ့….. ကိုယျ ဝနျရှိနတောလား အမေးခံရတာအထိ အိမျ့ခဈြက လကျခံတယျ….. တခြို့က ငါးလလောကျ ရှိနပွေီဖွဈမယျ ဆိုပွီးပွောနကွေတော့… ယူထားတာမှတလကြျောပဲရှိသေးတာ ဘယျလိုငါးလလဲပေါ့….
အဲ့လို နားမလညျတဲ့ ပရိသတျတှေ ရှိနတေော့ အိမျ့ခဈြကရှငျးပွရတာပေါ့.” လို့ အိမျ့ခဈြက လကျတလော သိသိသာသာ ဝလာ ၊ ခါးတုတျလာတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျ ရှိနပွေီလား မေးကွ ၊ ပွောနကွေတဲ့ အပျေါ ပွောလာခဲ့တာပါ။
အိမျ့ခဈြက သူမအနနေဲ့ ၂ နှဈလောကျ နပွေီးမှသာ ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျ ရှိကွောငျး အခုအ ခြိနျမှာ ဘဝကိုရုနျးကနျနရေဆဲဖွဈတာကွောငျ့ သူမတို့ဘဝထဲ ဝငျလာမယျ့ ကလေးလေးအတှကျ အသငျ့ မဖွဈမှာကို စိုးရိမျမိတာကွောငျ့ သူမတို့ ၂ ယောကျ အသငျ့ဖွဈခြိနျမှသာ ကလေးယူမယျ့ အကွောငျး ရှငျးပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အိမျ့ခဈြကတော့ ဝလာလို့ ခါးတုတျလာ တဲ့အပျေါ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ မေးကွ ပွောကွတဲ့အပျေါ ပွနျ လညျဖွရှေငျးပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိတျ သတျ ကွီးရေ။လတျတလော လူမှုကှနျယကျမှာ ခတျေစားနတောကွောငျ့ တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျနော